RASMI: Chelsea Oo Ugu Dambayn Bishan January Saxeex Samaysay, Shirkada Three Oo Ay La Saxeexdeen & Waxa Ay Ka Caawinayso. - Gool24.Net
Kooxda Chelsea ayaa ugu dambayn gudaha bishan January jamaahiirteeda usoo bandhigtay saxeex ay samaysay kaddib markii ay shaaca ka qaaday qandaraas ay isla meel dhigeen shirkada Three ee ka dhisan UK.
Shaqada ay qaban doonto Three ayaa ah inay bedeli doonto shirkadii hore Chelsea ugu qaabilsanayd dhinaca xuquuqda maaliyahada ee Yokohama Tyres kaddib markii ay Blues dhammaysteen heshiis shan sano ah oo ay shirkadaas kula soo jireen.
Heshiiskan ay Chelsea la gaadhay shirkadan is gaadhsiinta ah ayaa ah mid bilaabmi doona xilli ciyaareedka 2020-21 waxaana uu ugu yaraan ka muuqan doonaa maaliyada kooxdaas mudo saddex sano ah oo ah wakhtiga heshiiska hordhaca ah lagu heshiiyay.
Heshiiskan ay Blues la gaadhay Three ayaa ah mid dhaqaale ahaan ka sarreeya midkii shirkadii hore walow aan wali si buuxda loo sheegin tirada lacagta ah ee ay sanadkii ka heli doonto.
Marka laga yimaado inay sameeyeen heshiiskan oo horumar cusub u noqonaya haddana madaxda sarre ee kooxdaas ayaan wali si fiican uga jawaabin dalabkii taageerayaasha ee ahaa inay suuqan January ciyaartoy cusub u keenaan.
Kaddib ganaaxii suuqa ka saarnaa xagaaga, Kooxda ree London ayaan wali samayn wax saxeex ah oo kooxda koowaad ah waxaana ay xilli ciyaareedkan adeegsanayaan koox u badan da’yar amaah ugu maqnayn sanadihii hore.